Hargeisa:Wasiirkii Arrimaha Gudaha Somaliland oo is casilay | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Somaliland, WARARKA	> Hargeisa:Wasiirkii Arrimaha Gudaha Somaliland oo is casilay
Hargeisa – Wasiirkii Arrimaha Gudaha Somaliland Dr.Gaboose ayaa galabta warbaahinta kaga dhawaaqay inuu iska casilay xukuumadda uu madaxweyne ka yahay Siilaanyo.
Mar wax laga weydiiyay sababta keentay is casilaadiisa ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu u madax banaanaado himilada siyaasadiisa,taasoo uu ku tilmaamay inuu doonayo inuu furto xisbi maadaama la furay xisbiyadii.
Dr.Gaboose ayaa amaan usoo jeediyay xukuumadda uu iska casilay iyo Siilaanyaba,wuxuuna ku daray in xukuumaddu ay balanqaadyadeedii waxyaalo badan ka fulisay,wax qabadkaas oo ay kamid yihiin xagga nabadda waa sida uu hadalka u dhigaye,lacagta giimbaarka ahayd oo la badaly waa xaggaa Burco iyo furashada xisbiyada oo dawladdu hirgalisay oo ah ta maanta ii suurta galinaysa inaan xisbi furto.
Dr.Gaboose ayaa waxyaalaha uu ku dhaliilsan yahay xukuumadan u sheegay hab siyaasadaysan oo ay ku jirto waayo aragnimo maadaam uu yahay nin xukuumado badan lasoo shaqeeyay wuxuuna kusoo koobay waa jiraan waxyaalo lagu kala duwan yahay mar haddii maamul lagu wada jiro.
Si kastaba ha ahaatee waa hawl kusoo korortay xukuumaddii Siilaanyo ee ku dhisnayd garbaha isku tagay, Maxaase xiga?
Somalia:Isku dhac laga soo sheegayo Deegaanka Baargaal Libya:Libyan PM urges peaceful solution of his country’s political standoff